ကျစ်လစ်သော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
ကျစ်လစ်သော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
AOX-R ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကော်ပိုရိတ် လူမှုရေး တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, မျှဝေခြင်း နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ အပိုင်းners နှင့် cusသို့mers. တွင် ထို့အပြင်, အားလုံး ကျွန်တော်တို့၏ န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric စီမံခန့်ခွဲမှု, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ ကြီးမားသောest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer satဖြစ်faction.
1. Multi-ဗို့: AOX-R ကိုစီးရီးလေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏ဗို့အား 220VAC, 380VAC, 110VAC နှင့် 24VDC နိုင်ပါတယ်။
2. အပြည့်အဝပူးတွဲရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာ: AOX-R များ၏မော်တာစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator မြင့်မားစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
3. ရိုးရှင်းသောလက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ: AOX-R များ၏လက်စွဲစစ်ဆင်ရေးစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator Spanner နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ITA, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving ့။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကောင်းသောစီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ထားပြီးစတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက် တက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနဌာန၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်မှီခို Wenzhou တက္ကသိုလ်နှင့် Wenzhou အသက်မွေးမှုကောလိပ်။ AOX ၏စက်မှုဇုန်စကေးအခန်းကဏ္ဍမှအပြည့်အဝဆော့ကစားပေးပါနဲ့ high-tech AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ဖွံ့ဖြိုး။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ။
Q: ကျွန်တော်တို့ကို AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator အကြောင်းကိုyourâစျေးနှုန်းတစ်ခုစိတ်ကူးရှိသည်ကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော်မူမည်လော
ဖြေစျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားလျှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး Thea အရည်အသွေးကိုgood.âဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာအားလုံးမှန်သည်။
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်